MURUGO: Ciyaarihii Caalamiga Ahaa Oo Sababay Dhimasho Iyo Dhaawac - Cadalool.com
MURUGO: Ciyaarihii Caalamiga Ahaa Oo Sababay Dhimasho Iyo Dhaawac
Ciyaarihii caalamiga ahaa ee ay waddamadu ciyaarayeen ayaa waxa dhinac socday khasaare nafeed oo loo baroortay, halka kuwo kalena lagu daaweeyey cusbitaal.
Dalka Zimbabwe ayaa si rasmi ah iskaga xaadiriyey ciyaaraha qaramada qaaradda Afrika ee badhtamaha sannadkan lagu qaban doono waddanka Masar, kaddib markii ay Axaddii xaqiijisteen booskooda.
Magaalada Harare ayaa xulka qaranka Zimbabwe uu kusoo dhaweeyey dalka Congo-Brazzaville oo ay ku wada jiraan Group G, waxaana ay guusha ku heleen xulka martida loo ahaa 2-0, hase yeeshee ka hor intii aanay ciyaartaasi bilaabmin ayaa ciyaaryahannada iyo intii kale ee garoonka fadhidayba ay ogaadeen in barxadda hore ee garoonka uu ku geeriyooday hal qof kaddib markii ay ka dhacday isbuurasho iyo isjiidh-jiidh taageereyaashii soo galayey garoonka ah.
Qofka geeriyooday ayaa maydkiisa la geeyey cusbitaal ku yaalla magaalada Harare, laakiin sidoo kale waxa dhaawacyo soo gaadheen dad kale, kuwaas oo isku riixayey sidii ay ugu kala horreyn lahaayeen gelista garoonkii ciyaartu ka dhacday.
Maaha markii ugu horreysay ee ay dad ku dhintaan barxadda garoon ku yaalla qaaradda Afrika, hase yeeshee sannadkii hore ayay dhimasho ka dhacday dalka Madagascar xilli ay halka ka dhacaysay ciyaar isreeb-reebka Qaramada Qaaradda Afrika ah.